Minisitra Atallah Béatrice tany amin’ny ONU : maika ny fampandrosoana maharitra | NewsMada
Minisitra Atallah Béatrice tany amin’ny ONU : maika ny fampandrosoana maharitra
Nandray anjara tamin’ny fivorian’ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonina sivily, ny 21 avrily, ny delegasiona malagasy, notarihin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, tany New Yorlk, Etazonia, izay tany an-toerana ny 20-22 avrily.
Ho amin’ny fanohanana sy fanatanterahana haingana ny tetiandro momba ny fampandrosoana maharitra izany, araka ny tetiandro 2030, nolanina tany New York, septambra 2015, araka ny fanasan’ny filohan’ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana (ONU), Sem Mogens Lykketoft, ny delegasiona malagasy.
Tanjona amin’izany ny hanalana ny fahantrana, ny fiarovana ny planeta tany, ary ny fanomezana antoka ny fahombiazana amin’ny fampandrosoana maharitra. Hisy ny asa manokana isan-tsehatra amin’izany ao anatin’n y 15 taona manaraka.
Atrehina ny fiovaovan’ny toetr’andro
Nisy ny fanaovan-tsonia ny “Fifanarahana Paris“, andraisan’ny minisitra Atallah Béatrice anjara. Zava-dehibe ny finiavan’ny isam-pirenena sy ny iraisam-pirenena amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ho fiarovana ny planeta sy ny firosoana amin’ny fampandrosoana maharitra. Teo koa ny fihaonany tamin’ny filohan’ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiovaovan’ny toetr’andro (Cop 21), Ségolène Royal.
Niteny ho an’i Madagasikara ny filohan’ny Vaomiera iombonan’ny minisitera amin’ny fiaraha-miasa iadiana amin’ny zava-mahadomelina (CICLD) tamin’ny fifanakalozana fepetra isam-pirenena amin’ny ady amin’ny zava-mahadomelina, tamin’ny fivoriana faha-30 manokan’ny ONU, momba ny olana eran-tany amin’izany, ny 20 avrily.
Omanina ny fahatongavan’i Ban Ki-moon eto Madagasikara
Nisy ny fihaonan’ny delegasiona malagasy tamin’ny lehiben’ny kabinetran’ny sekretera jeneralin’ny ONU, Edmond Mullet, amin’ny fanomanana ny fahatongavan’ny sekretera jeneralin’ny ONU, Ban Ki-moon, eto Madagasikara ny 10-11 mey ho avy izao. Tamin’ny taona 2008 ny fitsidihan’ny sekretera jeneralin’ny ONU farany teto Madagasikara, izay fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny fampandrosoana ho tombontsoan’ny vahoaka malagasy.